Abuur miyuki oo tayo leh oo tayo sare leh ayaa alwaax ku dhejisa biraha dahabka leh ee samaynta dahabka
Qalabka dahabiga ah ee tayada wanaagsan iyo kuwa jaban, sida aaladaha qaarkood oo laga sameeyay koobyo qurux badan oo qurux badan, dhagaxyo dabiici ah, luul ayaa loo isticmaalaa hilqado, dugaagado, silsilado. Si aad ah ayey caan u noqdeen macaamiisha. Macaamiishayada dhexdooda, waxyaabaha ka samaysan guluubka galaaska ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee la iibiyay. Sababta oo ah waxaan haysanaa 7 sano oo waayo-aragnimo wax soo saar ah iyo 12 sano oo waayo-aragnimo ah oo soo-dejin iyo dhoofis ah oo xagga galaaska muraayadaha indhaha ah, waxaan nahay xirfad-yaqaano.
Qalabka muraayadaha indhaha ah ee galaaska, gaar ahaan waxyaabaha la galiyo dahabka alaabada. Iyada oo ay ugu wacan tahay diyuurada sarreeya ee xirmooyinka abuurka, taas oo lagu dhex dhejin karo qaabab iyo qaabab kala duwan, adeegsiga qalabka beeruhu abuurku waa mid aad u ballaaran. Waxaa keliya oo loo isticmaali karaa dahabka sida joornaalada, pendant, silsilado, dugaagado, hilqado, laakiin sidoo kale dharka, bacaha, iwm.
Waxaan haynaa dhammaan noocyada shey-qabatinka dahabka ah ee ku jira shaybaarka, ku soo dhowow inaad la tashato oo aad iibsato。
Nooc qurxinta Ganaaxyada ama sadaqada
Qaabka \_ Qaabka dhululubo
Nambarka Model JC 201909053AV
Noocyada Ganaaxyada ama Nooca Quruxda Pendant-yada Charm
Waxyaalaha Ugu Weyn ee Dahabka Bir daxal laheyn
Dhacdooyin Munaasabado kala duwan
Jinsiga Carruurta, Ragga, Unisex, Haweenka
Waxyaabaha Birta & Guluubka
Midab Midabyo kala duwan
Cabbirka 8 * 8mm
Isticmaalka Qalabka qurxinta DIY DIY
Magaca badeecada Seed Beads Charms Pendant
MOQ 12 xabbo
Dhagaxa weyn Beads Seed Beads
Culeyska guud ee jirka ah: 0.030 kg
Nooca xirmada: Sida codsigaaga ah!
Abuurka miyuki oo tayo sarre leh oo tayo sare leh birta qurxinta biraha qurxinta ee dahabka samaynta
Qalabka birta birta iyo birta
Hore: Bohemian fashion bead handmade mens dahabka jijimooyinka, jijimooyin jumladeed oo jumlaad ah
Xiga: Warshadda Jingcan jumlo jumlo ah oo tolo dhagxaan, ku tolo dhagaxyada rhinestones